Leicester City oo ku qasabtay kooxda Chelsea in ay dhibcaha ku qeybsadaan garoonka King Power… +SAWIRRO – Gool FM
Leicester City oo ku qasabtay kooxda Chelsea in ay dhibcaha ku qeybsadaan garoonka King Power… +SAWIRRO
(England) 01 Feb 2020. Leicester City ayaa ku qasabtay kooxda kubadda ee Chelsea in ay dhibcaha ku qeybsadaan garoonka King Power, kaddib markii ay ku kala baxeen bar-bardhac 2-2 ah, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 25-aad ee horyaalka Premier League.
Daqiiqadii 46-aad Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay xiddigooda Antonio Rudiger, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Mason Mount.
Laakiin daqiiqadii 56-aad kooxda martida loo ahaa ee Leicester City ayaa heshay goolka bar-bardhaca, waxaana dheesha 1-1 ka dhigay Harvey Barnes iyadoo uu goolkan ka caawiyay xiddiga lagu magacaabo Youri Tielemans.
Daqiiqadii 64-aad Leicester City ayaa markeeda hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 2-1 ka dhigay Ben Chilwell, waxaana caawinta goolkan lahaa Youri Tielemans.
Daqiiqadii 71-aad Chelsea ayaa heshay goolka bar-bardhaca Antonio Rudiger ayaa dheesha 2-2 ka dhigay, waxaana markale goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Mason Mount.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay bar-bardhac 2-2 ah ay isku dhaafi waayeen labada kooxood Leicester City iyo Chelsea kaddib kulan aad u xiiso badan ay ku wada ciyaareen garoonka King Power, kana tirsanaa kulamada horyaalka Premier League.
"Waxaan doonaynaa inaan ka dhigno Messi mid faraxsan, Barcelona ma'ahan Xavi & Iniesta" – Quique Setién
Lambarrada macquulka ah inuu midkood u xirto Kooxda Manchester United saxiixooda cusub ee Odion Ighalo